I Petera voakororoka ho amin’ny fiovam-po
"Ary hoy ny Tompo: Ry Simona, ry Simona, indro, Satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary. Nefa Izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao; ary rehefa mibebaka hianao, dia ampaherezo ireo rahalahinao" - Lio. 22:31,32.
Ny antony mahatonga ny olona maro izay milaza ho mpianatr'i Kristy ho lavo amin'ny fakam-panahy lehibe dia noho izy ireo tsy mahalala marina ny tenany. Izany no nahatonga an'i Petera nokororohin'ny fahavalo mafy dia mafy. [...] Raha miantoraka amin'i Kristy ny fanahintsika izay tsy mahefa na inona na inona, dia hofenoin'ny fahendreny ny tsy fahalalantsika, hofenoin'ny heriny ny fahalementsika, ary ny fahakelezantsika hofenoin'ny fahefany maharitra mandrakizay. Lavo i Petera satria tsy fantany ny fahalemen'ny tenany. Nihevi-tena ho mahery izy (...) Ho niambina mandrakariva tamim-pivavahana i Petera raha niara-nandeha tamim-panetren-tena tamin'Andriamanitra izy. Ho nanao izany koa izy raha niafina tao amin'i Kristy ny izahony, fa nikatsaka tamin-kafanam-po kosa ny fanampian'Andriamanitra izy. Ho nataony koa izany raha tsy natoky loatra ny tenany izy, fa nihaino ny toromarik'Andriamanitra sy nampihatra izany (...) Raha nandini-tena fatratra izy, dia ho nomen'ny Tompo fanampiana avy any an-danitra ary tsy ho nisy ny fikororohan'i Satana (...) Ny tafik'i Satana manontolo dia tsy mahefa na inona na inona amin'ny fanahy izay matoky amim-pahatsorana ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. — YI, 15 Desambra 1898
Ny fitsinjovan'i Kristy an'i Petera tamim-pitiavana no nahatafarina azy. Tsy nisy na inona na inona azon'i Satana natao nanoloana ny fanelanelanana mahery nataon'i Kristy. Ary ny vavaka izay nataon'i Kristy ho an'i Petera dia ataony koa ho an'izay manetry tena sy torotoro fo (...) Nanota tamin'ny fahazavana sy fahalalana i Petera, ary tamin'ny tombontsoa lehibe sady goavana nomena azy. Ny fahatokian-tena no fototry ny fahalavoany, ary mbola izany faharatsiana izany ihany no miasa ankehitriny ao am-pon'ny olona. Mety hikendry ny ho marina sy hanao ny marina isika, saingy azo antoka fa hania isika raha tsy mianatra tsy tapaka ao amin'ny sekolin'i Kristy. Ny hany fiarovana ho antsika dia ny mandeha amim-panetren-tena miaraka amin'Andriamanitra. YI, 15 Desambra 1898.